तपाईँंले चयन गरेको बेला तलका विकल्प उपलब्ध छन् प्रयोगकर्ता-परिभाषित अनुक्रमणिका प्रकार जस्तै.
प्रयोगकर्ता-परिभाषित अनुक्रमणिकाहरू उपलब्ध छन् प्रकार बाकसमा जब तपाईँंले कागजातमा अनुक्रमणिका प्रविष्टि घुसाउनुहुन्छ.
अनुक्रमणिकाहरूमा तालिका समावेश गर्नुहोस्.
अनुक्रमणिकामा घ्राफिक्स समावेश गर्नुहोस्.
अनुक्रमणिका OLE वस्तुहरू समावेश गर्नुहोस्.
स्रोत अध्यायबाट स्तर प्रयोग गर्नुहोस्
अनुक्रमणिका प्रविष्टि परिभाषित गर्दा